Xayeysiiska cusub ee iPhone 6s ayaa muujinaya Sawirro Toos ah | Wararka IPhone
Ka dib shalay ayay daabaceen saddex xayeysiis ku saabsan iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus, oo aan ku arki karnay sida "Hey Siri" iyo kaamirooyinka iyo kaamirooyinka fiidiyaha ah ay u shaqeeyaan, Apple ayaa maanta daabacday a xayeysiis cusub. Markan waxay diirada saareen wax sidoo kale ka muuqday shaacintii ugu dheerayd shalay, ee kaamirooyinka, si loo arko sida xiisaha leh Sawirada Live in kastoo, ay tahay in la sheego, soo saarista waxa ay ku sameeyaan xayeysiintan ma noqon lahayn, ka fog, wax fudud.
Xayeysiintan, oo ay ugu magacdareen "Maxkamadda Badhkeed" (xarunta garoonka), waxaan ka arki karnaa ciyaar yahanka Halyeeyada Dahabka ah, Stephen Curry, kubbada ka tuur bartamaha garoonka oo dhali. Intaas oo kaliya maahan, laakiin isagu ma fiirinayo dambiisha daqiiqadda ugu horreysa, marka waa inuu sameeyaa 90º leexasho ka dibna toogtaa. Laakiin, si Sawirka Tooska ah looga dhigo mid qosol badan, Curry ma arko haddii kubaddu soo gasho iyo in kale, haddii kalese wuxuu u jeedaa isagoo fiirinaya iPhone-ka oo wuu ogyahay inuu sameeyay dambiisha qeylada saaxiibbadiis darteed.
In kasta oo xayeysiintu leedahay a muddada 15 ilbiriqsi, waxay u badan tahay inay isku dayayeen waqti dheer ilaa ay ku guuleysteen inay ku qabtaan daqiiqada "sawir toos ah". Sawirrada Tooska ah waxay duubaan wadar ahaan 3 ilbidhiqsi, 1,5 sekan ka hor iyo ka dib qabashada, markaa ma aha oo kaliya in tallaalku adag yahay, laakiin sidoo kale in la qabto xilligan. Hadday ii sheegi lahaayeen in sawirka ugu dambeeya uu been yahay, waan rumaysan lahaa.
Sawirro Toos ah ayaa ka mid ahaa qodobada ku soo fiicnaaday iOS 9.1. Liistada isbeddelada waxay ku sheegaysaa in hada aysan duubeynin markaan kor uqaadno ama hoos u dhigno gacanteena ka dib markaan qaadnay sawirka, laakiin waxay sidoo kale siineysaa dareen ah inay diiwaan gelineyso in ka badan sidii hore ama aysan u muuqan sida ay hadda tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 6s » Apple waxay daabacdaa xayeysiis cusub oo loogu talagalay iPhone 6s oo muujinaya Sawirro Live ah